लेख > प्रवचन > मेरो नयाँ पहिचान
पेन्टेकोस्टको सार्थक चाडले हामीलाई सम्झाउँछ कि पहिलो क्रिश्चियन चर्च पवित्र आत्मा संग छापिएको थियो। पवित्र आत्माले तब देखि विश्वासीहरुलाई र हामीलाई साँच्चै नयाँ पहिचान दिनुभयो। म आज यो नयाँ पहिचान को बारे मा कुरा गर्दैछु।
केहि मानिसहरु आफैलाई सोध्छन्: के म भगवान को आवाज, येशू को आवाज, वा पवित्र आत्मा को गवाही सुन्न सक्छु? हामी रोमी मा एक जवाफ पाउँछौं:
मेरो पहिचानले मलाई अलग राख्छ
जस्तै आदम भगवान द्वारा बनाईएको थियो, उहाँ आफ्नो समानता, विशिष्ट र अद्वितीय मा हुनुहुन्थ्यो। उसको मौलिक पहिचानले उसलाई भगवानको सन्तानको रुपमा चिनायो। तेसैले उहाँ भगवान लाई भन्न सक्नुहुन्छ: अब्बा, प्रिय बुबा!
तर हामी हाम्रा पहिलो पुर्खाहरु, आदम र हव्वा को कथा जान्दछौं, जसको पाइलाहरु मा हामी उनीहरुको पछि लाग्यौं। पहिलो आदम र उहाँ पछि सबै मानव जातिले यो एक, आध्यात्मिक पहिचान चालाक धोखेबाज, झूट को पिता, शैतान को माध्यम बाट हरायो। यो पहिचान चोरी को नतीजा को रूप मा, सबै मानवहरु लाई परिभाषित चिन्ह गुमाए कि उनीहरु को फरक थियो, जसका बच्चाहरु थिए। आदम, र हामी उहाँ संग, भगवान को समानता, आध्यात्मिक पहिचान र हरायो - जीवन हरायो।
तेसैले हामी देख्छौं कि सजाय, मृत्यु, हामी मा पनि लागू भयो, जुन भगवानले आज्ञा दिनुभयो जब आदम र हामी, उसका सन्तान, उसको आवाज को अवज्ञा गरे। पाप र यसको प्रभाव, मृत्यु, हामीलाई हाम्रो ईश्वरीय पहिचान को लुटेको छ।
आध्यात्मिक, यो पहिचान चोरी एक गम्भीर प्रभाव थियो।
सेट उसको बुबा आदम पछि बनाईएको थियो, जसले भगवान संग आफ्नो समानता पनि गुमाएको थियो। जे होस् आदम र कुलपति धेरै बूढो भए, उनीहरु सबै मरे, र उनीहरु संग यो दिन सम्म। सबै हराएको जीवन र भगवान को आध्यात्मिक समानता।
भगवान को छवि मा नयाँ जीवन को अनुभव
मात्र जब हामी हाम्रो आत्मा मा नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ हामी पुन: निर्माण र भगवान को रूप मा रूपान्तरित हुनेछौं। त्यसो गरेर, हामी आध्यात्मिक पहिचान ईश्वर हाम्रो लागि चाहिएको फिर्ता हुनेछ।
किनकि हामी येशू, सत्य लाई पछ्याउँछौं, त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि हामी झुट बोल्न चाहन्छौं। यी दुई पदहरु यसैले पुष्टि गर्दछ कि पुरातन मानव स्वभाव बाट बाहिर निकाल्दै हामी येशू संग क्रूसमा टाँगिएका थियौं र येशूको पुनरुत्थान को माध्यम बाट ईश्वरीय प्रकृति संग लुगा लगाईयो। पवित्र आत्माले हाम्रो आत्माहरुको गवाही दिनुहुन्छ कि हामी येशूको छविमा नविकरण भएका छौं। हामी बोलाइन्छौं र पवित्र आत्मा संग छाप लगाइन्छ। एक नयाँ सृष्टि को रूप मा हामी पहिले नै हाम्रो मानव आत्मा मा ख्रीष्ट जस्तै बाँचिरहेका छौं, र उहाँ जस्तै, भगवान को बन्धन बाहिर बाँच्न। हाम्रो नयाँ पहिचान सत्य मा नवीकरण गरीएको छ र सत्य ले हामीलाई बताउँछ कि हामी साँच्चै मुटु मा छौं। प्रिय छोराहरु र ईश्वर को छोरीहरु संगै जेठा जेठा येशू।
हाम्रो पुनर्जन्मले मानव समझलाई उल्टो पार्छ। यो पुनर्जन्म निकोडेमस लाई पहिले नै उनको सोच मा कब्जा गरीएको छ र येशू लाई प्रश्न सोध्न को लागी प्रोत्साहित गरीएको छ। हाम्रो दिमागमा हामी एउटा क्याटरपिलर झैं झुण्डिएको हुन्छौं र त्यसपछि एउटा काठको बक्समा उल्टो कोकुन जस्तै। हामी अनुभव गर्छौं कसरी हाम्रो पुरानो छाला अनुपयुक्त र धेरै तंग हुन्छ। एक मानव क्याटरपिलर, पुतली र कोकुन को रूप मा, हामी केहि एक प्राकृतिक परिवर्तन गर्ने कोठा जस्तै हो: यसमा हामी एक क्याटरपिलर बाट एक नाजुक पुतली वा मानव प्रकृति बाट ईश्वरीय प्रकृति, ईश्वरीय पहिचान संग रूपान्तरित हुन्छौं।
यो ठीक येशू को माध्यम बाट हाम्रो मुक्ति संग हुन्छ। यो एक नयाँ सुरुवात हो। पुरानो क्रम मा राख्न सकिदैन, यो मात्र पुरा तरिकाले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। पुरानो पुरै गायब हुन्छ र नयाँ आउँछ। हामी परमेश्वरको आध्यात्मिक छवि मा पुन: जन्मेका छौं। यो एक चमत्कार हो कि हामी अनुभव गर्छौं र येशू संग मनाउँछौं:
पावल कोरिन्थीहरुलाई पत्र मा यो विचार को विकास:
यो समाचार सान्त्वनादायी र आशावादी छ किनकि हामी अब येशूमा सुरक्षित छौं। के भयो को सारांश को रूप मा, हामी पढ्छौं:
हामी ख्रीष्ट संग सँगै छौं, यसैले बोल्न को लागी, भगवान मा घेरिएको छ र उहाँमा लुकेको छ।
यो भगवान को मुख बाट यस्ता शब्दहरु सुन्न को लागी एक ठूलो खुशी छ। उनीहरुले हामीलाई निरन्तर प्रोत्साहन, सान्त्वना, र शान्ति दिन्छन् कि हामी कहीं पनि पाउन सक्दैनौं। यी शब्दहरूले सुसमाचार घोषणा गर्छन्। यसले हाम्रो जीवनलाई यति बहुमूल्य बनाउँछ किनकि सत्यले हाम्रो नयाँ पहिचानलाई व्यक्त गर्दछ।
पवित्र आत्मा को माध्यम बाट ज्ञान प्राप्त
भगवान उदार हुनुहुन्छ। उहाँको स्वभावले देखाउँछ कि उहाँ एक खुसी दाता हुनुहुन्छ र हामीलाई धनी उपहार दिन्छन्:
यो धेरै दु: खद हुनेछ यदि हामीले यो ज्ञान लाई मानव बुद्धि संग बेवास्ता गर्ने कोशिश गर्यौं। येशूले हाम्रा लागि के कती महान् कुराहरु गर्नुभएको छ, हामीले कहिल्यै पनि गलत बुझिएको नम्रताको साथमा बेइज्जत र बेइज्जत गर्नु हुदैन। यो हामी माथि कृतज्ञता र समझदारी ईश्वरीय ज्ञान संग भगवान को उपहार स्वीकार गर्न को लागी हो र अरुलाई यो अनुभव दिनुहोस्। येशूले हामीलाई उहाँको बलिदानको साथ महान् किन्नुभयो। नयाँ पहिचान संग उहाँले हामीलाई आफ्नो धार्मिकता र पवित्रता दिनुभयो, एक पोशाक जस्तै लुगा लगाएको।
शब्दहरु जस्तै: हामी छुटकारा पाएका छौं, उचित, र पवित्र सजीलै हाम्रो ओठ बाट पारित गर्न सकिन्छ। तर यो हाम्रो लागी छुटकारा पाउन को लागी गाह्रो छ, धार्मिकता र पवित्रता लाई स्वीकार गर्न को लागी, पद मा वर्णन गरीएको छ कि हामी पढे, व्यक्तिगत र बिना कुनै हिचकिचाहट। त्यसोभए हामी भन्छौं: हो, अवश्य, ख्रीष्ट मा, र यस बाट हाम्रो मतलब यो हो कि यो केहि टाढाको धार्मिकता वा पवित्रता को बारे मा छ, तर जसको प्रत्यक्ष प्रभाव छैन, हाम्रो वर्तमान जीवन को लागी कुनै सीधा सन्दर्भ छैन।
कृपया सोच्नुहोस् कि तपाइँ कती धर्मी हुनुहुनेछ जब येशूलाई तपाइँको लागी धर्मी बनाइएको छ। र कसरी पवित्र हुनुहुन्छ जब येशू तपाइँको पवित्रता बन्नुभयो। हामी यी गुणहरु छ किनकि येशू हाम्रो जीवन हो।
हामी क्रूसमा टाँगिएका थियौं, गाडिएका थियौं र येशूको साथमा नयाँ जीवन पाएका थियौं। यसैले भगवानले हामीलाई मुक्त, धर्मी र पवित्र भन्नुहुन्छ। उहाँले यसलाई हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान को वर्णन गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो तपाइँको हात मा एक नयाँ आईडी भएको र तपाइँको परिवार को हिस्सा भएको भन्दा परे बाटो जान्छ। यो हाम्रो दिमाग को लागी उहाँ संग एक हुन को लागी बुझ्न को लागी हो, किनकि हामी उहाँ जस्तै छौं, उहाँको समानता। भगवानले हामीलाई देख्नुहुन्छ कि हामी धर्मी र पवित्र छौं। फेरि, भगवान पिताले हामीलाई येशू जस्तै उहाँको छोरा, उनकी छोरीको रूपमा देख्नुहुन्छ।
येशूले के भन्नुभयो:
येशू तपाइँलाई भन्नुहुन्छ: मैले सँधै सावधानी अपनाएको छु कि तपाइँ सधैं मेरो राज्यमा मसँग हुनुहुन्छ। तिमी मेरो घाउ बाट निको भयौ। तपाइँ सदाको लागी क्षमा पाउनुभएको छ। मैले तिमीलाई मेरो अनुग्रहले नुहाएँ। त्यसोभए तपाइँ अब तपाइँको लागी बाँच्नको लागी हुनुहुन्न, तर मेरो लागी र मेरो साथमा मेरो नयाँ सृष्टिको भागको रूपमा। साँचो, तपाइँ अझै पनी नवीकरण गरीरहनुभएको छ जब यो साँच्चै मलाई थाहा छ, तर गहिरो तल तपाइँ नयाँ हुनुहुन्न भन्दा तपाइँ अब हुनुहुन्छ। मँ खुसी छु कि तपाइँ माथीका चीजहरु मा तपाइँको विचारहरु लाई ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ, जहाँ तपाइँ हुर्केका र म संग सारिएको हो।
तपाइँ मेरो ईश्वरीय जीवन व्यक्त गर्न को लागी बनाईएको हो। तपाइँको नयाँ जीवन सुरक्षित रूप मा म मा लुकेको छ। मैले तपाइँलाई जीवनको लागी चाहिने सबै चीज र मेरो डर संग सुसज्जित गरेको छु। मेरो दया र हृदय को भलाई संगै मँ तपाइँलाई मेरो ईश्वरीय समानता मा साझा गर्न अनुमति दिएको छु। जब देखि तिमी म बाट जन्मेका थियौ, मेरो अस्तित्व तिमी मा बास गरेको छ। सुन्नुहोस् मेरो आत्मा तपाइँको साँचो पहिचान को गवाही दिन्छ।
धेरै धेरै धन्यवाद, येशू, मैले सुनेको सुसमाचार को लागी। तिमिले मलाई मेरा सबै पापहरु क्षमा गर्यौ। तिमीले मलाई भित्र भित्र नयाँ बनायौ। तपाइँले मलाई तपाइँको क्षेत्र को लागी सीधा पहुँच संग एक नयाँ पहिचान दिनुभएको छ। तपाईंले मलाई आफ्नो जीवन मा एक हिस्सा दिनुभयो ताकि म साँच्चै तपाईं मा बाँच्न सक्छु। मँ धन्यवाद दिन्छु कि म मेरो विचारहरु लाई सत्य मा केन्द्रित गर्न सक्छु। म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु कि म यस्तो तरीकाले बाँचिरहेको छु कि तपाइँको माया को अभिव्यक्ति मेरो माध्यम बाट अधिक र अधिक देखिने गरीन्छ। तपाईंले मलाई पहिले नै आजको जीवनमा स्वर्गीय आशा संग स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, येशू।
टोनी पेन्टेनर द्वारा